”Ma jiro heshiis la dhameeyay oo uu Milan Skriniar ku aadayo Inter” – Wakiil – Gool FM
Wakiilka laacibka Milan Skriniar ayaa ku adkaysanaya in aan weli la dhamaynin heshiiska uu laacibkani ku tegi lahaa Inter Milan isagoo yiri – “weli ma dhamaanin, weliba waxaa jira dalabyo ka imanaya Spain iyo England”.
Madaxwaynaha Sampdoria ee Massimo Ferrero ayaa shalay ka dhawaajiyay in heshiis la gaarey, kaasoo uu dambeedkani kula biirayo Nerazzurri.
Yeelkeede, warsidaha Slovakian-ka ah ee Sport ayaa la hadlay wakiilka Skriniar oo isna sheegay inaan weli heerkaa la gaarin.
“Weli wax cusubi ma jiraan, waxaanse ogaan doonnaa Jimcaha,” ayuu yiri Karol Csontó.
“Waa inaan go’aansannaa wixii aan yeeli lahayn, waayo waxaa jira dalabyo kale, marka Inter laga yimaado sidoo kale Spain iyo England naga soo gaaraya. Jimcaha ayaanse ogaan doonnaa sidaan sheegayba.” ayuu raaciyay.